चितवन माविको टेण्डर , प्रक्रिया अवैध भयो : व्यवसायी, विधिपूर्वक छ : व्यवस्थापन समिति | चितवन पोष्ट
गृह » चितवन माविको टेण्डर , प्रक्रिया अवैध भयो : व्यवसायी, विधिपूर्वक छ : व्यवस्थापन समिति
भरतपुर । चितवन माविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको केही सटरहरुमा हालै गरेको टेण्डर प्रक्रिया अवैध भएको त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरुले ठहर गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चितवन माविले आर्थिक चलखेलका कारण आफूखुसी टेण्डर गराएर पुराना व्यवसायीहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले टेण्डर प्रक्रिया गर्दा सटर तथा प्लट खाली भएपछि सुरू गर्ने ठाउँमा खाली नहुँदै टेण्डर प्रक्रिया चालेको हुनाले यो अवैध भएको ठहर गरेका थिए ।
चितवन माविले हालै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र क्याम्पसको साइडतर्फको र चितवन मेडिकल कलेजको साइडतर्फको २६ वटा सटर भाडाको लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । स्कुलले सूचना जारी गरी त्यहाँ रहेका ३७ जना व्यवसायीहरुलाई सटर खाली गर्न दिएको निर्देशन पनि बुधबारदेखि सकिएको छ । तर व्यवसायीहरु आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको ढोका ढकढकाउन दौडधूप गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कतैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय माग्न जाने कसरत गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा जाने समयसम्म टेण्डर नखुलाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको जे निर्णय आउँछ, त्यो हामी मान्न तयार छौँ तर सर्वोच्चसम्म जाने समय त व्यवसायीले पाउनुपर्छ’, व्यवसायी गोविन्द आचार्यले भने, ‘३७ जना व्यवसायीका परिवारमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन, उनीहरुका पेटमा लात हान्न पाइँदैन ।’
सटरहरुमा रहेका व्यवसायीहरुको ५ वर्षको करार सम्झौता गत असारमा सकिएको हो । पुस मसान्तसम्मको भाडा असुल गरेर स्कुलले पुसको ७ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेण्डर आह्वानसँगै स्कुलले सूचना जारी गरेर व्यवसायीहरुलाई हट्न निर्देशन दिएको छ ।
‘व्यवसायीहरु भाडा समायोजन गरी बस्न तयार भएको अवस्थामा एकलौटी ढंगले टेण्डर आह्वान गरेर करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरु डुव्ने अवस्था आयो’ व्यवसायी आचार्यले भने, ‘म्याद थप नगरी ५/५ वर्षमा टेण्डर प्रक्रिया गर्दा व्यवसायीहरुको करोडौँ लगानी डुब्ने अवस्था आउँछ ।’
समय अनुकूलको भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीहरु तयार हुँदाहुँदै, एकपटक म्याद थप गर्न अनुरोध गर्दागर्दै पनि स्कुलले आफूखुसी टेण्डर आह्वान गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘हामी सर्वोच्चसम्म पुग्ने समय दिनुपर्छ, सर्वोच्चले हट भनेको दिन एक सेकेण्ड पनि हामी बस्दैनौँ’ व्यवसायी आचार्यले भने ।
‘चितवन मेडिकल कलेज र मैयादेवी कलेजलाई बिनाटेण्डर ५० वर्ष लिजमा दिन हुने, हामीलाई पाँच वर्ष थप्न नहुने ?’ अर्का व्यवसायी प्रफुल्ल शर्माले भने । उनले चितवन प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट व्यवसायीमाथि अभद्र व्यवहार भएको आरोपसमेत लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले चितवन माविले टेन्डर आह्वान गर्नै नमिल्ने दाबी गरे । उनले सर्वेच्चमा परेको मुद्दामा बोलपत्र टेण्डर जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नु भनेर आदेश भएको बेला अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म टेण्डर आह्वान गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
चितवन माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम लामिछानेले टेण्डर प्रक्रिया विधिपूर्वक रहेको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षको करार सम्झौताको समय सकिएपछि अरु के गर्न सकिन्छ ? टेण्डर त खुलाउन प¥यो ? विधि प्रक्रिया त मान्न प¥यो । त्यो प्रक्रियामा पुराना व्यवसायीहरु पनि सहभागी हुन पाएका थिए । सम्झौता सकिएपछि टेण्डर खुलाउने बाहेक अर्को कुन उपाय हुन्छ ?’
उनले व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ हुनु, स्थानीय तथा संघीय संरचनाको चुनावले गर्दा टेण्डर खुलाउन अझ ढिला भएको बताए । नयाँ टेण्डरमा हाल रहेका पुराना व्यवसायीहरु सहभागी हुन सक्ने उनले बताए ।
‘सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया अपनाएर नयाँ टेण्डर खुलाएको हो, टेण्डर पर्नेहरुबाट ६ महिनाको भाडा पनि लिइसकिएको छ, त्यसैले पुराना व्यवसायीहरुलाई सटर खाली गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु’ लामिछानेले भने । पहिलाको सटर भाडाअनुसार ४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आउने र अबको नयाँ सटर भाडा १२ लाख ९१ हजार आउने उनको भनाइ थियो ।
वन्यजन्तुको स्वास्थ्य व्यवस्थापन रणनीति बनाउन माग